सपथ किन खानु हुन्थ्यो त महाशय ?
अकुत पहिल्यै खाइसक्नु भएको छ,
सायद यहाँ ढुस्स अघाइसक्नु भएको छ !
संविधान किन मान्नुहुन्थ्यो त महाशय ?
तपाइँ मेरो भन्दा नि छिमेकीको भैसक्नु भएकोछ,
तपाइँको पाउमात्र यता टाउको उता भैसकेकोछ !
नेपाल तपाइँलाई किन चाहिन्थ्यो त महाशस ?
नेपाली खूनको धज्जी यहाँले राम्रैसँग उडाइसम्नु भएको छ,
सायद तल्तिरका दुशासनहरूको नून खानुसम्म खाइसक्नु भएको छ !
नेपाली बोल्न किन जान्नु हुन्थ्यो त महाशय ?
खानेमुख मात्र यताको बोल्ने जिब्रो उतैको लाइसक्नु भएको छ,
महाशय त महा"भारत"को विभिषण "भरतानन्द" पो भइसक्नु भएको छ !